"फ्लावर पेयरिंग रीतियुअल" सुपर तपाइँको मेटाबोलिज्म चार्ज गर्छ?
मिनेटमा मार्केटिंग फनेलहरू सिर्जना गर्नुहोस्!
तपाइँको पृष्ठ? यस ब्यानर हटाउनको लागि तपाईंको खाता रद्द गर्नुहोस्।
तपाइँले प्रस्तुतीकरण हेर्नु अघि जहाँ कार्लीले उनको मनमोहक आविष्कारहरू तपाइँसँग साझा गर्दछन्, हामीलाई उनको टोलीले सोधेको छ कि प्रत्येक व्यक्ति अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले मार्गनिर्देशनहरूको सेटमा सहमत हुन्छ।
मलाई मार्गनिर्देशन देखाउनुहोस्
"स्वाद जोडी अनुष्ठान" SUPERCHARGES तपाईको मेटाबोलिज्म?
हाम्रो छोटो क्विज लिनुहोस् यदि यसले तपाईंको लागि काम गर्न सक्दछ भने।
प्रश्न 1 / 7
जहाँ तौल भण्डार गरिएको छ यसले सीधा प्रतिबिम्ब गर्दछ कसरी निश्चित फ्याट-हानि हार्मोनहरू प्रदर्शन गर्दैछ। उदाहरण को लागी, टमाटरले 67% महिलाहरूको अग्नाशय-ईन्फ्लेमेसन निम्त्याउँदछ उनीहरूको मिडसेक्शनमा फ्याट भण्डारण गर्न बाध्य पार्दै:
तपाईंको उत्तर तल चयन गर्नुहोस्:
निम्नमध्ये कुनचाहिँ सत्य छ?
मैले मेरो अधिक तौल तल्लो आधा (नितम्ब, हिप्स र फिला) समातें।
मसँग स्याउ आकारको बढी छ; मेरो मध्य भाग र पेट क्षेत्र मेरो समस्या क्षेत्र हो।
मेरो अतिरिक्त वजन समान रूपमा मेरो शरीर मा वितरण गरिएको छ
मसँग एक घण्टा गिलास भन्दा बढी आकृति छ तर अझै एक जोडी अतिरिक्त पाउन्ड गुमाउन सक्छ।
गोपनीयता नीति \_ सम्पर्क \_ हाम्रो पछिल्लो फिटनेस सौदा
प्रतिलिपि अधिकार © 2019 सबै अधिकार सुरक्षित।
यो साइट फेसबुक वेबसाइट वा फेसबुक इंकको अंश होईन। थप रूपमा यस साइटलाई फेसबुकले कुनै पनि हिसाबले समर्थन गर्दैन। FACEBOOK FACEBOOK, Inc. को ट्रेडमार्क हो।
सम्बद्ध खुलासा: यस वेबसाइटले सन्दर्भ लिंकबाट बनाइएको खरीदहरूको लागि क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ
कार्य गर्दै ...